Kitra – «Prix Marc Vivien Foe»: norombahin’i Osimhen ny loka voalohany | NewsMada
Kitra – «Prix Marc Vivien Foe»: norombahin’i Osimhen ny loka voalohany
Notanterahina tany Frantsa, ny zoma 26 jona lasa teo, ny fizarana ny loka «Prix Marc Vivien Foe » ho an’ny taona 2020, eo amin’ny taranja baolina kitra. Norombahin’ilay Nizerianina Victor Osimhen, milalao ao Lille, ny voalohany tamin’izany. Mitotaly 284 ny isa azony, tamin’ity. I Osimhen izany no nandimby an’ilay Ivoarianina Nicolas Pepé, nahazo izany tamin’ny taon-dasa.
Raha tsiahivina, fifaninanana karakarain’ny Radio France International (RFI) sy ny France 24 izy ity ka natokana ho an’ireo mpilalao afrikanina mandray anjara amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Frantsa “Ligue 1”. Nahatafiditra baolina 13 i Osimhen, nandritra ny fifaninanam-pirenena frantsay ary nahavita nanolotra baolina inefatra tao anatin’ny lalao 27, niakarany kianja. Izy ihany koa no mpilalao tanora indrindra nandrombaka ity amboara “Prix Marc Vivien Foe” ity satria vao 21 taona monja ny tovolahy.
I Victor Osimhen izany no mpilalaon’i Lille, fanindiminy nahazo ity loka ity, taorian’i Gervinho, ny taona 2010, 2011 ary i Vincent Enyeama, ny taona 2014. Teo koa i Sofiane Boufal, ny taona 2016 ary i Nicolas Pepé, ny taona 2019.
Teo amin’ny laharana faharoa, ilay Alzerianina, milalao ao amin’ny AS Monaco, i Islam Slimani, nahazo isa 95. Eo amin’ny laharana fahatelo ilay Maraokanina, lohalaharan’ny Stade de Reims, i Yunis Abdelhamid, manana isa 89.